ကင်မရာ ၄ လုံးပါဝင်တဲ့ HTC U12+ ပုံရိပ်တွေထွက်ရှိလာပြီ – AsiaApps
ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ HTC ဟာ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး Flagship U12+ ကို Samsung Galaxy S9, Huawei P20 Pro တို့နဲ့အပြိုင်ထုတ်လုပ်မိတ်ဆက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မမိတ်ဆက်ရသေးခင်အချိန်မှာပဲ HTC ဟာ U12+ ရဲ့ ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကပဲချပြခဲ့တာပါ။
ထွက်ရှိထားတဲ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီး အရင်ဆုံး အံ့သြသွားမှာကတော့ U12+ မှာကင်မရာ ၄ လုံးပါဝင်နေတာကိုပါ။ အနောက်က Dual ကင်မရာ/ အရှေ့က Selfie dual ကင်မရာ စုစုပေါင်း ၄ လုံးပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ (HTC ကတော့ ကြမ်းပြီ ?) ဖုန်းရဲ့ မျက်နှာပြင်ပိုင်းကတော့ အခုလက်ရှိမှာ Trend ဖြစ်နေတဲ့ 18:9 display နဲ့မြင်တွေ့ရမှာပါ။ အနောက် Dual ကင်မရာအောက်မှာ FingerPrint ရှိနေပြီး ဖုန်းရဲ့ဘေးမှာ Volume အတိုးအချဲ့ခလုတ်နဲ့ Power ခလုတ်လေးပါဝင်မှာပါ။
Fingerprint, Volume button နဲ့ Power button တို့ တည်နေရာတွေက နောက်ပိုင်းထွက် Android ဖုန်းတွေလိုပဲဖြစ်တာကြောင့် အရမ်းကြီး မထူးခြားသွားပေမယ့် ဖုန်းအောက်ဘက်မှာ Headphone Jack မပါဝင်တာကတော့ တော်တော်လေးကြေကွဲစရာပါ။ (နောက်ဆုံးတော့ iOS user တွေရဲ့ Headphone Jack ပြဿနာဟာ Android user တွေဆီကူးပြောင်းလာခဲ့ပြီလေ ?)။ ဖုန်းရဲ့ ရှေ့မျက်နှာပြင်ကိုသာမက အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုလည်း မှန်တွေနဲ့တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဘေး Frame ကတော့ အာလူမီနီယံနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းအရွယ်အစားကတော့ ၆ လက်မ အထိဖြစ်မယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ရှိနေပါတယ်။
U12+ မှာ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 845 အသုံးပြုထားမှာဖြစ်ပြီး RAM 6GB/ 128GB Storage နဲ့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Storage version ကတော့ အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ OS ပိုင်းကတော့ Android 8.1 Oreo နဲ့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းပိုင်းက တော့ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ စတင်မိတ်ဆက်မယ့်အချိန်ကတော့ မေလအလယ်ပိုင်းလောက်ဖြစ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
HTC ဟာ ၂၀၁၇ တုန်းကအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ စမတ်ဖုန်းလောကမှာလည်းတော်တော်လေး ကို အင်အားလျော့နည်းနေတဲ့ အခြေအနေပါ။ ကုမ္ပဏီရဲ့အခြေအနေတွေအားလုံး ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားအောင် HTC အနေနဲ့ U12 ကိုကျော်ပြီးမိတ်ဆက်မယ့် U12+ ကိုဘာလိုတွေ အခမ်းနားဆုံး ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သွားမလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။